कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीले लिए सपथ - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
१० मंसिर २०७५, सोमबार ०७:१३ November 26, 2018 Nonstop Khabar
सुर्खेत । कर्णाली विकास अायाेगका पदाधिकारीले पद तथा गाेपनियताकाे सपथ खाएका छन् । आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकाय र योगेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार पद तथा गोपनीयतको शपथ खुवाएका हुन्।
अायाेगले अब कर्णाली प्रदेश विकासकाे विस्तृत खाका तयार गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने बताइएकाे छ । अायाेगले कर्णाली प्रदेश समृद्धिका लागि विकासको नयाँ मोडल तयार गर्न सबैसँग छलफल गरिने पनि जनाएकाे छ । त्यसैगरी आयोगले कर्णाली प्रदेशको प्रोफाइल तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। उक्त मानचित्रमा कर्णालीमा विगतको अवस्था र हालको अवस्था समेटिने बताइएकाे छ । त्यही मानचित्रका आधारमा विकासको नयाँ मोडल लागू गरिने बताइएकाे छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले विगतमा काठमाडौंमा निर्माण भएका योजना कर्णालीमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब कर्णालीमैत्री योजना निर्माण गरिने बताए। उनले भने, ‘कर्णालीमा धेरै सम्भावना छन्, स्रोत र साधन पनि पर्याप्त छ। अब हामीले यहाँको माटो सुहाउँदो विकास योजना निर्माण गर्नेछौं, कर्णालीमैत्री योजना बनाएर केही वर्षभित्रै विकसित कर्णाली बनाउने हाम्रो अठोट छ।’
आयोगले काम सुरु गरिसकेको भन्दै उनले तत्कालका लागि बजेट कार्यान्वयनको गाँठो फुकाउन वार्षिक योजना बनाउने बताए। त्यस्तै पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिने र कर्णालीको भिजनपत्र पनि सार्वजनिक गर्ने आयोगले जनाएको छ। हाल गरिब भए पनि कर्णालीको मुहार बदल्ने गरी योजना बनाउने उपाध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ। यस्तै आयोगले अब प्रदेशमा विकास बजेटको कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासका काममा भइरहेको सुस्ताताबारे पनि तीव्र अनुगमन गर्ने जनाएको छ। अनुगमनको अभावमा आयोजना अलपत्र परेको भन्दै आयोगले अब अनुगमनलाई कडाइ गरिने जनाएको हो।